Maitiro Ekubata 6 Makuru IoT Chengetedzo Nyaya? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
iot, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
Maitiro Ekubata 6 Makuru IoT Chengetedzo Nyaya?
IoT (Indaneti yezvinhu) ndiyo yazvino kuitika muhunyanzvi. Iri kusimukira kumusoro nekukurumidza kubatanidza chero zvigadzirwa zvehardware kune ako smart zvishandiso. Iye zvino, unogona kunyatsogadzirisa chero zvishandiso nemamiriro ezvinhu sezvaunoda kushandisa IoT.
Asi, izvi zvinonyanya kufungidzirwa uye kutaurwa nezve tekinoroji yakachengetedzwa? Technocrats zvinoratidza izvi neimwe nzira.
HP yakawana chinoshungurudza. Vakaona kuti inenge 70% ye IoT zvishandiso vanowanzoda kurwisa.
Wikileaks yakaratidza kuti kuburikidza neIoT, smart TVs inogona kushandiswa semidziyo yekurekodha, kunzwa hurukuro. Munguva ino yedhijitari, kuchengetedzeka ndicho chinhu chekupedzisira pane yedu yekutarisa. Maakaundi ekubhengi, mapassword eNhare, Mobile galleries zvese zviri panjodzi kune izvi chibatiso nyaya. Saka chii chaungaita pamusoro peizvi? Verenga kuti uzive zvimwe nezve zvinogona kutyisidzira uye kuti ungaita sei nazvo.
Kufarira IoT? Bata iyo 5 Nhanho Strategy yeIoT kuita mukati Business:
Major IoT Dziviriro Nyaya Dzatinoda Kubata:
Mukufambiswa kwedhijitari, chero dhata raunotumira rinozonyorerwa, iro rinogona kutorwa nemushandisi. Hackers vanogara vachitsvaga nzira dzinobvira dzekuba idzi data. Pakubata chigunwe, data rako rinogona kunge riri pamunwe wavo. Fungidzira iwe unogona kuchengeta yako yemabhangi ruzivo mune yako smartwatch. Iko hakuna vimbiso yekuti maHacker haagone kuba iyi data kure newe. Izvi ndizvo zvese zvaunoda here? Kune dzimwe nzira dzingangoitika dzaungazvidzivirire nadzo.
Shandisa Secure Sockets Layer Protocol (SSL) pese paunobata nedata online. Zvizhinji zve Websites shandisa SSL certification ye encryption uye kuchengetedza kwemushandisi data.
Nguva dzose shandisa wireless protocol ine inbuilt encryption. Munguva yekufambisa dhata isina waya, data rinofanirwa kuverengerwa. Nekudaro vimbisa kuti kune dzakajeka dhata nzvimbo dzinongowanikwa chete kune vakataurwa vashandisi
Shandisa firewalls kana paine webhu kunyorera.
Read More: 12 Nyanzvi Dzichipindura Kuti IoT Inoshanduka sei pamusoro peiyo Inotevera 2-3 Makore
Nekudaro, Dhata yakaverengerwa. Ko kana mudziyo ukabiwa? Hackers zviri pachena jack yezvivakwa zvese, uye tenzi wevakawanda. Ivo vanokwanisa zvinopfuura zvakanyanya isu zvatinofunga.
Ngatitii watenga mudziyo weIoT kugadzirisa mota kupaka. Iyo data inogona kubuda-zvisizvo, ichiita kuti iwe utende kuti kwaingori mota dzakamiswa. Iyo chaiyo nhamba inogona kunge iri 7. Iye Nha. 7 Motyairi mutyairi anogona kushandisa zvisirizvo data uye kuita chero mhando yechiitiko muchivako chako. Kuti udzivise izvi zvese, shandisa zvakakodzera maprotocol anogona kupa ne:
Yakachengeteka musangano kiyi kusimbiswa
Tarisa uone kana zvitupa zvakapihwa kune smart kifaa chiri zviri pamutemo. Funga kaviri, usati watenga mudziyo weIoT.
Read More: 13 Statistics Inotsanangura Ramangwana reIoT
3.IoT Hardware Nyaya:
Tech hofori seArM neIntel vatanga kugadzira chibatiso zvigadziriso kumidziyo yavo yakangwara. Chikonzero chiri shure kweichi IoT. Nekuda kweiyo hype uye inobata dingindira, IoT yakakwanisa kukwezva ruzhinji. Izvi zvakamutsa vakawanda chibatiso nyaya. Zvishandiso zveSmart zvakava panjodzi yekurwiswa necyber. Hardware nyaya dzakavhura yakawanda mibvunzo pakati peIoT vanofarira.
Aya machipisi achave nechokwadi chekukwira mune avo kugadzira mari. Iyo yakaoma dhizaini inoda yakawanda bhatiri simba. Haasi ese michina inopfeka inoshandisa machipisi akadaro. Saka zvigadzirwa zvakachengetedzwa hazvingakwanise kune wese munhu. Panofanirwa kuve netekinoroji iri nani, inosvikika kune wese munhu maererano nemutengo uye mashandisirwo. Kana zvishandiso zvisina mutengo-zvine ushamwari kune mumwe nemumwe mushandisi, saka IoT ichagara iri tekinoroji iri yepamusoro.
Paive nenguva apo nzvimbo yaive nePC imwe chete. Yaiva godo reboka rezvehupfumi. Asi zvese zvakachinja zuva rimwe nekuda kwehuwandu hwekugadzira huwandu uye kushandisa michina. Izvi zvinogona kunge zviri zveIoT. Yakachengeteka uye yakachengetedzwa Hardware, pamwe nemutengo-unoshanda mhinduro dzinogona kubuda mune ramangwana nguva. Izvi zvinobatsira vateereri vakawanda mune dzimwe nzira.
Read More: 3 Makuru Matambudziko ane Wearable IoT uye avo Mhinduro
4. Hardware kuyedza hakudzivisike:
ngwara IoT zvishandiso ndinofanira kuongororwa kare kugadzira. Izvi zvinoderedza IoT chibatiso matambudziko. Asi, tinogona here kugara tichivimba nekuyedza kunoitwa neyunifomu yuniti? Hatikwanise kuzviongorora here yedu IoT chishandiso? Zvakanaka, zvinogoneka.
Dhizaini yedhivhaji, iyo memory memory yechigadzirwa, scalability, reconfigurability, uye latency yechigadzirwa chinofanirwa kuyedzwa pamusoro, usati watenga chero chinhu cheIOT. Ndiani anoziva, kana chishandiso chakachengeteka zvakakwana kuti chivimbike? Kunze kwekunge tikazviedza, hatigone kuvimba nechigadzirwa.
Chikurukuru, Zviite iwe pachako (DIY). Manufacturing kuyedza kuchaita kuti iwe unzwisise kuti mudziyo uri pasi pekutonga kwako uye data zvakare. Kune akati wandei YouTube mavhidhiyo uye mamwe masosi anowanikwa pane Indaneti, izvo zvichakubatsira mune izvi.
Read More: Yakachenjera Yakachengeteka Here? Matanho makuru eIoT Matinoda Kukunda ASAP
5. Kugadzirisa zvigadziriso:
Kugadziridza chiitiko chenguva dzose, icho chigadzirwa chose chinosanganisira. Izvo hazvigoneke kune yeku-pamusoro-iyo-mhepo yekuvandudza, inogadziridza pasina nguva yekuzorora. Dhata ingangoda kuburitswa kwechinguva kana kuwanikwa mumuviri. Mimwe michina inogona kusatsigira kugadzirisa data kunyanya vechikuru. Muridzi angangodaro asina kusarudza kugadziridzwa kwemidziyo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kuchengeta nhanho dzekuvandudzwa kwakaoma. Asi iwe unogona kushandisa maneja wako wekushandisa kuti uteedzere vhezheni pane yega kifaa. Izvi zvinosiya nzvimbo yekuwedzera clearance. Mimwe michina inotsigira kugadzirisa zvinokanganisa kana kusundira kunze zvigadziriso.
Read More: Iwo mana Akanakisa Anoshandisa eIoT muBhangi neMari
Kuchengeta dhata hakusi kunetsa kukuru mazuva ano. Zvakawanda semazioni emabheti anogona kuchengetwa pamhepo. Kune zvivakwa asi nerusununguko kunouya mabasa. Kuchengeta dhata hachisi chinhu chikuru asi kutsigira kwavari. Kwatinobva isu kwatinotsigira data kunogona kunge kusiri kwakachengeteka. Chero ani zvake anogona kuba iyo data uye kupindira mune kwedu zvakavanzika. Semuenzaniso, ngatiti iwe wakatsigira yako IoT dhata mune yako nhare. Iwe unosiya nhare muchitoro che pizza. Tinogona here kuvimbisa kuti nhare yaisazobiwa? Kuti udzivise idzi nyaya, shandisa chaiyo nharembozha mapassword uye gonesa maviri-nzira sisitimu, kudzivirira hassles.
Read More: 5 Consumer IoT Zvikumbiro Zvine Kukosha Chaiko
General Matipi ekudzivirira IoT Mishaps: -
Tenga mudziyo, chete mushure mekusimbisa zvitupa zvakakwana. Usatenge zvishandiso zvakachipa uye zviri nyore.
Rangarira chirevo chekare- Usatonga bhuku nebutiro rayo? Ichaenderana neIoT. Tsvaga iwe pachako usati watenga chero chinhu cheIoT. Usavimba bofu. Chigadzirwa chega chega chine zvadzinokanganisa.
Enda chete kune zvishandiso zvinopa chibatiso vimbiso. Bvunza vatengesi vako nezve izvi. Tenga chigadziro chinodhura-chinodhura, panguva imwe chete, chakachengeteka.
Ita shuwa kuti data raunochengeta rinoonekwa kwauri chete. Gonesa makiyi ega ega uye chibatiso mavara echivande.
Kana iri yakavhurika-sosi dhata, usasiye iyo data isina kumiswa. Izvi zvinogona gare gare kutungamira mukusuwa sezvo vabati vari kwese kwese!
Usambofa wakakundikana kushandisa iyo SSL dura uye HTTPS protocol. Izvi zvinokubatsira iwe kuchengetedza zvakachengeteka data rako, kana paine webhu data.
Tora hanya nezvinhu zvako pachako kwawakachengetera data rako reIoT. Nguva dzose cherekedza iyo IMEI nhamba mune mbozhanhare. Kana zvachose ukarasikirwa nazvo, ive shuwa kutora matanho sekufonera wako webasa mupi kana mutengi kutarisirwa kuti uvazivise kuti warasikirwa nharembozha yako. Nenzira iyi, data rinogona kuchengetedzwa zvakachengeteka kusvika pamwero.
Kune akatiwandei IoT anopfeka anowanikwa. Asi sarudza chete zvishandiso zvinodiwa kwauri, mune yako yepamutemo kana yehupenyu hupenyu. Usambofa wakazvitenga nekuda kwekuyedza. Izvi zvinogona kukonzera dambudziko.
Ndinovimba iyi ruzivo inobatsira kuchengetedza yako IoT chishandiso zvinobudirira.
Une chirongwa cheIOT? Bata nhasi.